Deer Dance Log Cabin - I-Airbnb
Nashville, Indiana, i-United States
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Eric
Ngeke ukholwe ukuthi uyimizuzu eyi-8 kuphela ukusuka eDowntown Nashville lapho ukhuphuka umgwaqo oya kule ndawo enhle yokubaleka. Icashe kakhulu kumahektare angama-5 anezinkuni, leli gumbi lokulala eli-2, ikhabethe lezingodo zokugeza ezi-2 liyinto evamile ngendlela yokubaleka kwezothando njengoba kumnandi ngempelasonto nomndeni wakho noma abangani abaseduze.
Uma ufuna ukuphuma futhi udabule eNashville noma uhlole ipaki yezwe, imizuzu eyi-12 nje ukusuka, kuningi okumelwe ukwenze. I-Bloomington, kanye ne-IU Campus, ingaphansi kwemizuzu engama-30 ohambweni lwe-scenic drive nge-IN 45, ngakho-ke indawo yakho itholakala kahle kakhulu ukuze uvakashelwe ekhampasi nganoma yisiphi isizathu. Uma isimo sezulu sidinga ukuzidela kwangaphandle okuncane, ungahlala ngaphansi kompheme ozungezayo futhi ufunde incwadi ekujikeni, udle kuvulandi obonisiwe ngemva kokulungisa ukudla ekhishini elinefenisha ephelele, udlale umdlalo, udubule ichibi. , thola ukuthokomala phambi kweziko legesi, ubukele i-TV noma uhlangane nalabo onabo futhi uzinike isikhathi sokuqhubeka nohambo lokuphila. Kunesikhala esiningi nendawo yokuthi wonke umuntu akwazi ukwelula nokushaja kabusha. Kungakhathaliseki ukuthi usuku lwakho luletha ini, uzojabulela ukukwazi ukwehlisa umoya ku-barbeque, uphumule kubhavu oshisayo, nokuhlala uzungeze umgodi womlilo ebusuku. Ungakhohlwa ukuletha wonke ama-fixin's ama-s'mores!
Sithemba ukuthi i-Deer Dance Log Cabin ingaba indawo ozofuna ukwenza izinkumbulo ezikhethekile unyaka nonyaka. Ziningi izibuyekezo ezenzekayo manje nezihlelelwe ikusasa eliseduze. I-inthanethi manje isiyatholakala, kodwa kulungile uma unqamula futhi ungayisebenzisi!
Ngaphandle kwemibhede yenkosi nendlovukazi, kukhona ne-futon egcwele.
Kunenkokhelo engu-$75 isilwane ngasinye sezindawo zethu ezilungele izilwane ezifuywayo.
Ikhabethe le-Deer Dance Log linedrayivu eqondile. Kuyasiza uma unemoto yangaphambili noma engu-4. Lapho ukhuphuka igquma gcina isivinini esiqinile futhi akufanele ube nezinkinga.
YONKE IMICIMBI, IZIVAKASHI ZESUKU, KANYE NEZINHLANGANO ZIYENQATSHELWA NGAPHANDLE KWEMVUME EBHALWE NGAPHAMBILI EVELA EKUPHATHWENI KOMHLABA.